News - Olee mgbe ntuziaka ipigide na-agbanwe? Anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ihe atọ ndị a
Kedu mgbe njigide akwụkwọ ntuziaka na-agbanwe? Anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ihe atọ ndị a
Ngwongwo ntanye nke nnyefe ntuziaka bụ nke ndị na-eri ihe. Na ojiji nke ụgbọala, ipigide efere ga-eyi ntakịrị. Mgbe ejiji ruru ogo ụfọdụ, ọ dị mkpa ka edochi ya. Olee otú anyị pụrụ isi mara na ipigide efere ga-agbanwe? Dị ka gara aga ahụmahụ, m na-eche ndị na-esonụ ọnọdụ ukwuu n'ime na-egosi na ipigide efere ga-agbanwe.
1. Ngwunye ipigide bu arọ, na nkewa mmetụta abụghị ihe doro anya
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na pedal ipigide ahụ dị arọ karịa ka ọ dị na mbụ, ma ị nwere ike ikwenye na enweghị nsogbu na nnyefe site na pọdolitị gaa na njigide, ọ ga-abụ na mbadamba akara ahụ dị gịrịgịrị.
N'ihi na ipigide efere na-sandwiched n'etiti flywheel na mgbali efere, mgbe ipigide efere bụ nnọọ oké, na esemokwu efere nke nsogbu efere na-akwado site ipigide efere, na-egweri efere mmiri na nsọtụ ọzọ ga-tightened n'ebe n'ime. N'oge a, ọ na-adị mfe mbanye egweri efere mmiri site n'itinyekwu ipigide. Ọzọkwa, pedal ahụ dị mfe ma dị arọ, enwerekwa obere nguzogide n'oge nkewa, ebe pedal na-adịkarị ọkụ tupu nkewa na mgbe nkewa.
Mgbe ipigide efere na-aghọ thinner, esemokwu efere nke mgbali efere ga-akpali n'ime, na-eme ka-egweri efere mmiri na-tilt n'èzí. N'ụzọ dị otú a, mgbe ị na-abanye na ipigide ahụ, ọ ga-adị mkpa ka a kpalie mmiri iyi diaphragm ka ọ kwaga ebe dị anya karị, na ike nke mmiri diaphragm ahụ ezughị iji bulie mbadamba nrụgide na mbugharị mbụ. Naanị mgbe a na-agbanye mmiri mmiri na-egweri ruo n'ókè ụfọdụ, a ga-ekewa efere nrụgide. Yabụ n'oge a, pedal ipigide ga-adị arọ nke ukwuu, na mmetụta nke oge nkewa dị oke ọkụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume.
Ọ bụrụ na ihe a emee, mgbe iwepụsịrị ihe ndị ọzọ, enwere ike ikpebi ya na mbadamba njigide ahụ dị ntakịrị, mana ekwesighi ka edochie ya n'oge a, n'ihi na ọ pere mpe, ma ọ naghị emetụta ọrụ nkịtị. Ọ gwụla ma ịchọrọ na pedal ahụ dị oke arọ ma achọghị ịzọ ụkwụ na ya, ị nwere ike ịtụle iji dochie ya, ma ọ bụghị na ọ gaghị abụ nsogbu maka oge ọzọ.
2. The ipigide disengages na a obere nzọụkwụ
Nke ahụ bụ, njigide nkwonkwo njigide dị elu. N'ihi na ipigide efere na-sandwiched n'etiti flywheel na mgbali efere, mmiri mmiri nke nsogbu efere egweri efere pushes mgbali efere esemokwu efere ka pịa ipigide efere tightly na flywheel. Thicker ipigide efere bụ, ukwuu na deformation nke mgbali efere egweri efere mmiri bụ, na ukwuu na clamping ike bụ. The thinning ipigide efere bụ, nta deformation nke-egweri efere mmiri bụ na nta na clamping ike bụ. Ya mere, mgbe efere ipigide dị gịrịgịrị ruo n'ókè ụfọdụ, agbatịwo ike nkedo nke mbadamba nrụgide dị na ya. Ọ bụrụ na ị pịa ipigide ipigide a obere, ipigide ga-ekewa.
Ya mere, mgbe ị hụrụ na ipigide pedal bụ fọrọ nke nta rụrụ ruo ọgwụgwụ mgbe ị na-amalite, ụgbọ ala ga-akpali, ma ọ bụ ipigide ga-ekewapụ mgbe ị na ụkwụ na ipigide pedal a nta, nke bụ ukwuu n'ime n'ihi na oké eyi nke ipigide efere. N'oge a, a ga-edochi efere ipigide ngwa ngwa o kwere mee, n'ihi na n'oge a, mpempe akwụkwọ mkpuchi dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ọ na-aga n’ihu na-abụ ala, rivets ndị a na-edozi nke efere ipigide ga-emebi emebi na nrụgide ahụ ga-emebi.
3. Mbanye ijide
Achọghị m ịme nke a. Ngwunye ipigide ahụ dị oke mkpa. Mbadamba nrụgide na flywheel enweghị ike ịnyefe ya ike ọfụma. Egbula oge a, gbanwee ya ozugbo enwere ike. N'ihi na ọ ga - emebi mmebi nsogbu gị, mana ọ na - eyi nchekwa ịnya ụgbọ agha iyi egwu. Were ya na ị dịla njikere iru n'ụzọ ahụ, ụkwụ nke mmanụ dị ala gbadara, njigide ya, ụgbọ oloko na-afụsi ya ike, na spomita ahụ agagharịghị, nke ahụ jọgburu onwe ya.
The mbụ arụmọrụ nke ipigide ileghara adịghị anya, na ya nwere ike o siri ike obi mgbe ụgbọala na ala gia. Ọ nwere ike na-eche mgbe ụgbọala na elu gia na n'itinyekwu na ome osooso. N'ihi na ipigide adịghị mkpa nyefee ukwuu torque mgbe ụgbọala na ala gia, na ipigide ibu ka ukwuu mgbe ụgbọala na elu gia, n'ihi ya, ọ dị mfe ileghara.